फोहोर फ्याँक्नेको पहिचान सीसीटीभीबाट - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं, असार ३१ । अरूको आँखा छल्दै फोहोरको पोको बोकेर कता लाग्दै हुनुहुन्छ ? कतै बाटोघाटो, चौबाटोको मोड र छिमेकीका घरढोकाअगाडि फोहोरको पोको बिसाउने मनशाय त छैन ? यसो हो भने महानगरीय प्रहरी परिसर र काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी टोलीले तपाईंलाई सीसीटीभीबाट पहिचान गरी ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।
अब बाटोघाटोमा फोहोर छोडेर फुत्कनेलाई पनि यही सीसीटीभीमार्फत पक्रने छ । त्यति मात्र होइन, निजी स्तरबाट राखिएका सीसीटीभीमा कैद भएका प्रमाण वा मोबाइलबाट खिचिएको दृश्यलाई पनि मान्यता दिएर फोहोर फाल्नेलाई कारबाही गरिने छ ।
याे पनि पढ्नुस मादक पदार्थ सेवन गर्ने २४५ चालक कारवाहीमा
महानगरपालिका कार्यान्वयन विभाग प्रमुख धनपति सापकोटाका अनुसार अपराध अनुसन्धान, गुन्डागर्दी, सवारी दुर्घटनामा र ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन, सामाजिक अभद्र व्यवहार सबैलाई सीसीटीभीको केन्द्रीय कक्षबाटै पहिचान गरेर कारबाही गरिन्छ ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान सिंहका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सुरुबाटै महानगरका सबै दोबाटो, चौबाटोमा सीसीटीभी जडान हुने छ । अहिले पनि फोहोर जथाभावी फ्याँक्नेलाई कारबाही नभएको भने होइन । कार्यान्वयन विभाग प्रमुख सापकोटाका अनुसार तीन लाख रुपियाँ जरिवाना शुल्क महानगरपालिकाले उठाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस ८४२६ प्रहरीले किन छाडे संगठन? यस्तो छ मुख्य कारण
प्रवक्ता सिंह भन्छन्, “अब फोहोर फाल्नेलाई पटकैपिच्छे ५० हजार रुपियाँ जरिवाना हुन्छ । जडित सीसीटीभीबाट यस्ताको पहिचान गरेर घरडेरामै पुगेर कारबाही गरिन्छ । ” नेपाल प्रहरीले सीसीटीभी जडानका लागि बोलपत्र नै आह्वान गरिसकेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
ट्याग्स: CC TV camera, Fohar, police